Izindaba - I-Liner Yonke Yesimo Sezulu seTesla Model Y yesiqu Sangemuva Sesiqu Sangemuva
I-All-Weather Cargo Liner yeTesla Model Y yesiqu sangemuva seTrunk MAT
Ama-All-Weather Cargo Liners enzelwe ukuvikela indawo yakho yezimpahla ekuchithekeni, amabala, udaka nokungcola.
Ama-grooves ajulile ahamba futhi abamba amanzi ngempumelelo, ngenkathi izindonga ezinhlangothini eziphakanyisiwe zinikeza ukuvikela onqenqemeni nokuvikela
uketshezi oluvuzayo kukhaphethi.
Ukuthungwa okungamelana nama-skid kusiza ukugcina ukudla nezesekeli zivikelekile esiqwini sokugcina ngaphandle kokuzulazula.
Kusetshenziswa ubuchwepheshe bokuskena kwe-laser ephezulu kakhulu, wonke ama-3D Cargo Liners enziwe ngokwezifiso ukuze alingane ngqo nethrekhi yesiqu ngokunemba okuphezulu nokufakwa phansi.Yenziwe ngezinto eziqinisekiswe imvelo ze-SGS, wonke amacansi ethu ezimoto awanabo ubuthi futhi ayinaphunga ngakho awudingi ukuzwa iphunga lenjoloba elingathandeki.Kungakaze kube lula ukuhlanza omata. Mane usule uhlanzekile ngendwangu emanzi, noma ususe emotweni yakho, hamba ipayipi futhi wenze izindwangu zakho zempahla zibe zintsha futhi.
I- Imithwalo yemithwalo yemithwalo elungiselelwe ngokwezifiso ingukuvikelwa kwangaphakathi kwezinguquko zezimoto zakho ezinesakhiwo esisha, esingafani nesendlalelo ezintathu. Idizayini enezinombolo ezintathu ezilinganiswe ngokulinganisa imingcele yangaphakathi yemoto yakho yokubamba ukungcola nokuchitheka. Isendlalelo esiphansi esinelungelo lobunikazi sokulwa ne-skid sigcina amacansi endaweni ngaphandle kokulimaza ukhaphethi wokuqala. Isendlalelo sobuso esihle sihlinzeka ngesitayela, okungangenwa manzi, ukuvikelwa ukuvikela ingaphakathi lakho.
Imodeli kamata we-Y TPR Custom Fit All-Weather Cargo Liners iyisivikelo sangaphakathi soguquko futhi ingenye yezinsiza ezihamba phambili zezimoto zakho. Kusetshenziswa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokuskena i-laser, ilitha ngayinye yezimpahla ilinganiswa ukulingana isiqu semoto yakho ngokunemba okuphezulu nokufakwa phansi. Ukwakhiwa kwama-hybrid multi-layer okwakhiwe okusha kwenzelwe ukuhlinzeka ngokuvikelwa kwangaphakathi kwezimoto okuphelele, ukumunca ukudlidlizela, ukunciphisa umsindo womgwaqo, nokugcina okuthengwayo kuvikelekile esiqwini ngaphandle kokuzulazula.
Isikhathi Iposi: Oct-08-2020
Uyini umehluko phakathi kwakho ...
Amaphepha ezinyawo ze-PVC ne-TPE